ဤကွတ်ကီးပေါ်လစီသည်နောက်ဆုံး ၂၀၁၂/၂၀၁၁ ရက်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပြီးဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာ၏နိုင်ငံသားများနှင့်တရားဝင်နေထိုင်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် https://comme-un-pro.fr (အောက်တွင် - "ဝက်ဘ်ဆိုက်") ကွတ်ကီးများနှင့်အခြားဆက်စပ်သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည် (ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအတွက်၊ ဤနည်းပညာအားလုံးကို "cookies" ဟူသောဝေါဟာရအားဖြင့်သတ်မှတ်သည်) ။ ကွတ်ကီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းထားသောတတိယပါတီများကနေရာချသည်။ အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသင့်အားအကြောင်းကြားသည်။
၂။ cookies ဆိုတာဘာလဲ။
ကွတ်ကီးသည်သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသည့်ဖိုင်ဖြစ်သည်၊ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများကိုပို့။ သင်၏ကွန်ပြူတာ (သို့) အခြားစက်၏ hard drive ပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာမှသိမ်းဆည်းသည်။ ထိုတွင်သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာတတိယပါတီများ၏ဆာဗာများသို့နောက်တစ်ခေါက်လည်ပတ်စေနိုင်သည်။
၃။ script တွေကဘာတွေလဲ။
Script တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကောင်းမွန်စွာနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေရန်အသုံးပြုသော code အပိုင်းအစဖြစ်သည်။ ဤကုဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်သည်။
4. မမြင်ရတဲ့ Beacon ဆိုတာဘာလဲ။
invisible beacon (သို့မဟုတ် web beacon) သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိအသွားအလာကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုသောဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမမြင်ရသောစာသားသို့မဟုတ်ပုံရိပ်သေးငယ်သည်။ ဤသို့ပြုရန်သင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်များကိုမမြင်ရသော tags များဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။
5 ။ ကွတ်ကီး
၅.၁ နည်းပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သော cookies များ
အချို့သောကွတ်ကီးများကဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သေချာစေသည်။ အလုပ်လုပ်သော cookies များကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားသောအခါတူညီသောအချက်အလက်များကိုထပ်ခါတလဲလဲရိုက်စရာမလိုပါ၊ ဥပမာပစ္စည်းများကိုသင့်ငွေပေးချေသည့်အချိန်အထိသင်၏စျေးဝယ်ခြင်းတွင်ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ cookies များကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲတင်နိုင်ပါသည်။
၅.၂ စာရင်းအင်း cookies များ
စာရင်းအင်းများကိုအမည်မဖော်ဘဲစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်စာရင်းအင်း cookies များကိုတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိပါ။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာကွတ်ကီးများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏ရလဒ်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်စေနိုင်သည်။ သင်၏အပြုအမူပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည် https://comme-un-pro.fr။ ဤကွတ်ကီးများဖြင့်သင် ၀ က်ဘ်ဆိုက် visit ည့်သည်အနေဖြင့်သင်သည်ထူးခြားသောအိုင်ဒီတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားမည်ဖြစ်သော်လည်းထို cookies များသည်သင်၏အပြုအမူနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း / ခြေရာခံခြင်းကွတ်ကီးများသည်ကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်အခြားသိုလှောင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာကိုပြသရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများကိုဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရှာဖွေရန်အတွက်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းများကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤ cookies များကို cookies များကိုခြေရာခံခြင်းအဖြစ်မှတ်သားထားသောကြောင့်၎င်းတို့အားနေရာချရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည်။
၆။ Cookies များနေရာချသည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်စာရင်းဇယားအတွက် Matomo ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ထူးခြားသော user ID ကိုသိမ်းထားပါ
ထူးခြားသော session ID ကိုသိမ်းထားပါ
ရည်ညွှန်း ID ကိုသိုလှောင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် cookie ၏သဘောတူညီမှုကိုစီမံရန် Complianz ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ Complianz သီးသန့်တည်ရှိမှုကြေညာချက်.
မည်သည့် cookie အလံကိုပြသမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ
လက်ခံထားသော cookies ပေါ်လစီ၏ ID ကိုသိမ်းထားပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းအတွက် Divi (Elegant Themes) ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
et-save- post- *
အယ်ဒီတာ - ရရှိနိုင် - ပို့စ် *
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအတွက် ET Editor ကိုသုံးတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် Pretty Links ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဝဘ်ဆိုဒ်စာရင်းအင်းအတွက် Yandex Metrica ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရင်းအင်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက် ဆိုင်းငံ့ထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
ဗီဒီယိုများပြသရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Wistia ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ Wistia သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်.
wistia-video- တိုးတက်မှု *
အသုံးပြုသူသည် ထည့်သွင်းထားသော အကြောင်းအရာကို မြင်ပါက သိမ်းဆည်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ cookies အကြောင်းရှင်းပြချက်နဲ့ pop-up ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပြပါမယ်။ “ Save preferences” ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ cookie ပေါ်လစီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း pop-up ၀ င်းဒိုးမှာသင်ရွေးထားသော cookies နှင့် extensions အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ browser မှတစ်ဆင့် cookies များကိုအသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည် -
ဤအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီကွတ်ကီးမူဝါဒရဲ့အောက်ခြေရှိဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်တိုင်ကြားချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားလိုပါသည်။ သို့သော်သင့်အနေဖြင့်ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (EDPS ကဲ့သို့ဒေတာကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ) နှင့်တိုင်တန်းခွင့်ရှိသည်။
၉။ Cookies များကို Activate / Deactivate နှင့် Delete လုပ်လိုက်ပါ
သင်သည်သင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကို သုံး၍ ကွတ်ကီးများကိုအလိုအလျှောက်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဖျက်နိုင်သည်။ အချို့သော cookies များကိုနေရာ ချ၍ မရပါ။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့သင်၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီး cookie တစ်ခုစီတိုင်းကိုသင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလက်ခံရရှိသည်။ ဤရွေးချယ်စရာများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်သင်၏ဘရောင်ဇာ၏အကူအညီကဏ္inမှညွှန်ကြားချက်များကိုကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာ cookies အားလုံးပိတ်ထားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သင်သည်သင်၏ browser ထဲတွင် cookies များကိုပယ်ဖျက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ထပ်မံလည်ပတ်သောအခါသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်၎င်းတို့ကိုထပ်မံထည့်သွင်းပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ cookie ပေါ်လစီနှင့်ဤဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်များကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ဤကွတ်ကီးမူဝါဒနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ထားသည် ကွမ်းခြံကုန်း အဆိုပါ 24 / 01 / 2022